Filtrer les éléments par date : mardi, 12 décembre 2017
mardi, 12 décembre 2017 08:13
Toamasina: Vary lo sy simba 1.019 gony nodorana
Ampahany tamin’ireo vary simba sy lo tra-tehaky ny “Task Force” tao Andraoranga ireo, ary voamarina tamin’ny fitiliana natao fa tsy azo hanina intsony, ka nodorana omaly alatsinainy 11 desambra atoandro.
Misy vary 964 gony ihany koa, eo ampiandrasana ny valin’ny fitiliana natao mikasika azy, koa raha voamarina fa tsy azo hanina dia hodorana ihany koa ireo.
Teratany Pakistaney miisa telo no nanafatra ireto vary ireto, izay vao iray volana izay no nahatongavany eto Toamasina, vary mitondra ny marika “Moto”, “Rizmate”, ary “Bora”. Ny talata 12 desambra izy ireo ho hatolotra ny Fitsarana rehefa avy nataon’ny Zandary famotorana.
Mandeha ny feo mialoha izany fa mamofompofona famotsiam-bola ity fanafarana vary vahiny mahazo vahana tato ho ato ity. Misy amin’ireo vahiny mpanafatra vary ihany koa no voalaza fa “visa fizahantany" no nahatongavany eto, tsy ahafahany manao fandraharahana, nefa dia manafatra vary izy ireo.
Ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny Fitsarana no hahafantarana ny tohin’ny raharaha.